(Yangon Globe ဘလော့ခ်) ။ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ။
အသက် ၇၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ စန္ဒယားတင်ဝင်းလှိုင်က တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ၊ သူဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ မြေးဖြစ်သူ နေရွှေသွေး ကို သရော်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ စကားတွေ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ မြေးက အဖွားရဲ့အသည်းဖြစ်နေတယ်၊ အဘိုးရဲ့အသည်း ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအဘိုးနဲ့အဘွားက ငကြောင်ကြီးဆို သွားပြီပဲ၊ ငပေါမကြီးဆို သွားပြီပဲ။ ဒီမှာတော့ ဘုရင်နဲ့ ဘုရင်မပေါ့လေ။ အစဉ်အလာပေါ့။ ဗမာမှာ ဒါပဲ ဂုဏ်လုပ်နေရတာ” လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုစကားမျိုးတွေကို ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးမှာ မပြောဆိုသင့်ကြောင်းအချို. ကထင်မြင်သလို၊ အခြားတစ်ဖက်မှာ တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မရှိ၊ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ စစ်အစိုးရရဲ. ကျဉ်ဖယ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ. ခံစားချက်တွေ ပွင့်အံကျလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယူဆသူတွေလည်းရှိပါတယ်။
“သူဘာတွေကြောင့် ဒီလို လုပ်တယ်ပြောတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ က နားအလည်ဆုံးပါ၊ ဆရာတို့ ကျနော်တို့ professional မာနကို တသက်လုံးဖက်တွယ်ပြီး လူကြီးတွေနဲ့ အတိုက်အခံ ဖြစ်ခဲ့ရသလို သူလဲ မှန်ကန်တဲ့ ပညာရှင်မာနနဲ့ တစ်သက်လုံး အဲဒီလောကက လူတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်နေခဲ့ရတာပါ၊ ပင်ကိုယ် အင်မတန် မာန်မာန မရှိတဲ့လူပါ” လို့ သစ်တောနဲ့ပတ်ဝန်ကျင်ရေးရာပညာရှင် ဦးမောင်မောင်သန်းက သူ့ရဲ. Facebook ပေါ်မှာရေးသားထားပါတယ်။
တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲတွေမှာ ခုလိုနိုင်ငံရေးအရ သရော်တယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ အနုပညာလောကသားတွေအတွက် အထူးအဆန်းလို့ ထင်ရပေမယ့်၊ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာတော့ အနုပညာသည်တွေဟာ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုမှတ်ချက်ပေးတာ၊ သရော်တာ ရှုံ.ချတာဟာ ထုံးစံဆိုသလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ဥပမာအားဆုိုသော် နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင် မင်းသားကြီး ရစ်ချက်ဂီရိဟာ ၁၉၉၃ အော်စကာရုပ်ရှင်ပေးပွဲမှာ တရုတ်အစိုးရကို တိဘက်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှုံ.ချပြောဆိုခဲ့လို့ ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စန္ဒယားတင်ဝင်းလှိုင်ကတော့ သူပြောဆိုခဲ့တာနဲပတ်သတ်ပြီး ခုလိုအငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ်လွတ်လပ်မှုမရှိသေးလို့ ဖြစ်ရတာလို့ မဇ္စိုမသတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“အခုဟာက ကူးပြောင်းစဖြစ်နေတယ် ဆိုတော့ ဘောင်းဘီတစ်ဝက်၊ ပုဆိုးတစ်ဝက် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ဘောင်းဘီကလည်း ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်ကြီး မကျွတ်သေးဘူး။ ပုဆိုးကလည်း သိသိသာသာ ခါးမှာ မချည်နိုင်သေးဘူး။ ဒါကတော့ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံမှာက ၀ီစီက သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ လွတ်လွတ် လပ်လပ်မဖြစ်သေးတဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ ၀ီစီဟာ ပြဿနာရှိနေသေးသယောင်ယောင် ရှိနေသေးတယ်။”
အစိုးရပိုင်မြန်မာ့အသံနဲ. ပုဂ္ဂလိကတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MRTV-4 တို့က ဒီဆုပေးပွဲကို ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာ စန္ဒယားတင်ဝင်းလှိုင်ရဲ.စကားတွေကို ဖြတ်တောက်ပြီးလွှင့်ခဲ့တာဟာ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ရနေပါပြီလို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ. မရိုးသားတဲ့စရိုက်လက္ခဏာကို လည်းပြသနေပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေနဲ့သင့်မြတ်အောင်နေရမယ်၊ “လူကြီးတွေ” ရှေ.မှာ ဒီလိုမပြောရဘူးဆိုတဲ့ သေးသိမ်တဲ့စိတ်၊ အာဏာချုပ်ကိုင်ထားသူတွေကို ခယချင်တဲ့ ကျွန်စိတ်တွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ ခေါက်ရိုးကျိုးအမြစ်နက်နက် တွယ်နေပြီဆိုတာ စန္ဒယားတင်ဝင်းလှိုင်ရဲ. အဖြစ်အပျက်ပေါ်အခြေခံတဲ့ တုံ.ပြန်သံတွေက ပဲ့တင်ထပ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ စန္ဒယားတင်ဝင်းလှိုင်မမှားပါ၊ အာဏာရှင်တွေအပေါ် ကျွန်စိတ်ထားသူတွေသာ ဒီကျွန်စိတ်တွေကို ခ၀ါချဖို့ကြိုးစားသင့် ပြီဖြစ်ပါတယ်။
စန္ဒယားတင်ဝင်းလှိုင်ပြောသွားတဲ့စကားအပြည့်အစုံကို DVB Debate များကို တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ ကိုမျိုးသာထက်ရဲ. ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာရေးထားတာကို သူ့ရဲ.မှတ်ချက်နဲ.အတူ အောက်မှာကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကတညုတက ကျေးဇူးကို အဖန်ဖန် အောက်မေ့တာပေါ့လေ။ အဲဒီမှာတင် မပြီးဘူး၊ ကတဝေဒီက ဆပ်တာပေါ့နော်။ သမ္မဇဉ်ပါပဲခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရှေ့က ယူသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာတွေလည်း ဒီလိုပဲ ပြောတာပါပဲ။ သူတို့ ကျေးဇူးတွေ ကျွန်တော်တို့က တသက်လုံး ဆပ်လို့ မကုန်ပါဘူး။
တကယ်တော်တာကတော့ ပန်းချီဦးစိုးမိုးပါခင်ဗျာ။ တကယ်ကောင်းတာက ဇာတ်ညွှန်းဆရာပါခင်ဗျာ။ နောက် ဘေးက ပံ့ပိုးကြတဲ့ (ကျွန်တော်) ကြိုက်သလောက်ပေါ့။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ တီးပြီးသားဟာကို မနက်ဖြန် ပြန်ဖျက်ရင် ဖျက်ပါတယ်။ ဒါ အခု ၀န်ခံတာပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်က လွန်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပေါ့လေ၊ ဒါလေးတော့ ပြောခွင့်ပြုပါ၊ လေရှည်တယ်ထင်ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ကိုကြည်စိုးထွန်းက ၁၉၉၉ လောက်မှာ ကျွန်တော့်ကို... မောင်လျှမ်းထက်တို့ပါတဲ့ ကားလေးကို ကျွန်တော်နဲ့ သီချင်းသွင်းပါတယ်။ သီချင်းသွင်းလည်းပြီးရော ကျွန်တော်က အင်္ဂလန်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော်က စာဂျပိုး Book Worm ဆိုတော့ ဒိုင်ယာနာရှိတဲ့ ဒိုင်ယာနာမြို့ (ဝေလပြည်) ကို သွားပြီး Library စာကြည့်တိုက်ကြီးမှာ ကျွန်တော် ပျော်ပျော်ကြီး သုံးပတ်လောက် သွားပြီး နေနေပါတယ်။ ဝေလစာကြည့်တိုက်ဆိုတာ (ယူကေနိုင်ငံရဲ့) အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပဲလေ။
အဲဒါကို ကျွန်တော် ပျော်နေတာနဲ့ ကိုကြည်စိုးထွန်းက လှမ်းပြီးဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်ကလည်း ပြောပါတယ်။ လာပါ၊ ရုပ်ရှင် (ကားအတွက် အသံ) သွင်းရအောင်၊ ကျိန်းသေ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ၀ါစဉ်အရလည်း အသက်အရလည်း... အစ်ကိုကြီး ဦးကြီးမြင့် ပြောခဲ့သလို ``မင်း... ထိုင်သာ စောင့်နေပါ၊ မင်းအလှည့်ကျရင် ရောက်လာမှာပေါ့ကွာ`` ဆိုတဲ့အခါ ``အစ်ကိုရယ် ဒါက ထိုင်စောင့်တာတော့ မရပါဘူး၊ ကံအလှည့်ဖြစ်ရင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့အလှည့်ကတော့ မရပါဘူး`` လို့...၊ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဘယ်လောက်လုပ်လုပ်ပေါ့လေ၊ မယ်နုအုတ်ကျောင်း ဆရာတော်ဘုရား ပြောသလိုပါပဲ။
အခုဘယ်လောက်လုပ်လုပ် ငွေဖလားထဲမှာ...၊ သူ့မြေးလေးလည်း ပါတယ်ပေါ့။ ကိုယ်တော်ဘုရားနဲ့ ကိုယ်တော်ဘုရားရဲ့ မိဖုရားကြီးနဲ့ အခုလုပ်နေတဲ့ ကုသိုလ်တွေဟာ ဘယ်လိုများ ရှိမလဲဆိုတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီ မယ်နုအုတ်ကျောင်းဆရာတော်... (အဲဒီဆရာတော်က) သူ့အမေကို အိမ်ရှေ့ (ကျောင်းရှေ့) ကနေပြီးတော့ (အသုဘ) ချသွားတဲ့အခါမှာတောင် ဒကာမကြီးရေ... သွားနှင့်၊ ကိုယ်တော်တော့ နောက်မှ လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ စာကြည့်မပျက်ဘူးပေါ့၊ အဲဒီကိုယ်တော်ပေါ့။
တပည့်တော် အခုသွားရတော့မယ်၊ တပည့်တော်ကို လည်ပင်းကို နင်းတော့မယ်၊ ဘာနဲ့နင်းမလဲ မသိတော့ဘူးဆိုတော့ (ဟေး....ပရိသတ်များအော်သံ) အဲဒီလို Applauds (အားပေးလက်ခုပ်တီး) လာတဲ့အခါမှာ Just for Minute , Just for Second (မိနစ်ပိုင်း၊ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်) ခဏလေး နားပေးရမယ်ဆိုတာ လူမသိဘဲ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာတွေက သင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ဘယ်လောက်တော်တော် မဖြစ်ပါဘူးလို့...။
ခုနပြောတဲ့ ရေဖလားထဲကို ဘုရင်ကြီးနဲ့ ဘုရင်မရှေ့မှာ ရေတွေထည့်လိုက်တယ်။ ဟောဒီမှာ ကြည့်ကြ၊ ဘုရင်ဆိုတဲ့လူ၊ ဘုရင်မဆိုတဲ့လူ ဘယ်တုန်းက ကံတွေ သံသရာမှာ ပါလာတဲ့အတွက် ဘုရင်နဲ့ဘုရင်မ ဖြစ်တယ်ဆိုတာက နင်တို့တစ်ခါတည်း သိကြ။ နို့မို့ဆိုရင် ဘ၀င်မြင့်နေမှာစိုးလို့၊ သူတို့က ဘယ်တော့မှ ဒီနေရာက ဖယ်တာမဟုတ်ဘူး။
သူက (ဆရာတော်က) ကြည့်ကြည့်ဆိုပြီး ရေကို ပြတယ်၊ အဲဒီလောက်ပဲ မင်းတို့ ရမယ်တဲ့၊ မင်းတို့ ခု ဘယ်လောက်လှူလှူ အဲဒီလောက်ပဲ ရမယ်ဆိုပြီး ပြတဲ့အခါကျတော့ အထဲမှာ ရေမရှိပါဘူး။ ဒါကို နားလည်ရမှာက ဥာဏ်သိ သိရမယ်။ ဘယ်လိုဥာဏ်သိ သိရမလဲ ရေတော့ မရှိဘူး၊ အထဲမှာ စိုနေတယ်။ အစိုဓာတ်ကလေး ကျန်ခဲ့တယ်။ ဒါပဲရမယ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ကြိုးစားကြိုးစား ကျွန်တော် အဲဒီလောက်ပဲ ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ သီးခြားဂုဏ်ရည် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ လက်တီးမှာ (ကျွန်တော်တို့ ဂီတနဲ့ လက်တီးလို့ ခေါ်ပါတယ်) Virtuoso ပါ၊ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရပ်တည်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘယ်မှာမှ မျက်နှာမငယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလောက်နဲ့ မရပါဘူး။
အဲဒီအတွက် ကျွန်တော့် သံသရာက ပါလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ကို ၁၉၉၉ က အကယ်ဒမီရဖို့ ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ ကိုကြည်စိုးထွန်းလည်း သူ့စေတနာ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယ ခုနက ကျွန်တော့်ကို လာပြီးတော့ နှုတ်ဆက်တဲ့ လူကောင်သေးသေးလေးပေါ့လေ၊ လူကောင်သေးသေးလေးက ဘယ်လိုမှ မကြီးနိုင်ဘူး။ သူ့မှာ ပညာကြီးပါတယ်။ ပဋိဘာနဥာဏ်ကြီးတယ်။ လူက မကြီးဘူး၊ ပညာက ကြီးတယ်။ သူက ဘာမှ ထပ်ကြီးလို့ မရတော့ အင်္ကျီအပွ အမြဲတမ်းဝတ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူ မကြီးကြီးအောင် နှုတ်ခမ်းမွေး တပ်ရတယ်။ အဲဒီ ခင်မောင်ကြီး... သူ အကယ်ဒမီရပြီး နောက်နေ့မနက်ကို သူ့အိမ်ကိုသွားပြီး အောက်ကနေ ကြိုးဆွဲတာ ကျွန်တော်ပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့မှာ အဘိဇ္ဈာ၊ မစ္ဆရိယ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲဒီ သူ ရတဲ့ ကားဟာ ကျွန်တော့်ကို အရင်အပ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာလည်း အားလုံးဟာ အပြစ်ကလေးတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် Filthy (ညစ်ကျယ်)၊ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပါ။
ဂီတမှူးတွေထဲမှာ ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်နဲ့ ကျွန်တော့်ပုံမျိုး မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်နောက်မှာ လည်း ကျွန်တော့်နောက်က တီးနေတဲ့ ပထမပေးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကလည်း အသံကျယ်နေပါတယ်။ မောင်လှအေး၊ ဗိုလ်တာထွန်းညွန့် ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ဥာဏ်နဲ့ Velocity (အလျင်) နှုန်းကို မမီသေးပါဘူး။
သို့သော် ကျွန်တော့်သမီးကြီးအသက်က ၄၈ နှစ်ပါ၊ နောက်နှစ်နှစ်ဆို ၅၀ ပြည့်ပါပြီ။ ကျွန်တော်က ၇၀ ပါ။ နွေပေါက်တာနဲ့ ၇၀ ကို နင်းပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကို ဦးအောင်မြင့်မြတ်က ပြောတယ်၊ တွဲမယ့်ကလေး ခေါ်လာပါတဲ့။ ဘာမှမလိုပါဘူးခင်ဗျ၊ အေးဆေးပါ၊ ပါးပါးလေး... (ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် စင်ပေါ်တွင် စက္ကန့်ပိုင်း ရပ်ပြ)။ ကျွန်တော့်အမူအရာတွေ မကျစ်လစ်ဘူးဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
ကျွန်တော် ပြောပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ Just surfing on that easy matter. အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားတာက ကျွန်တော့်အစ်ကို၊ ကျွန်တော့်ကို ဒီပညာ သင်ထားပေးတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းကောင်းလေး ပညာပေးနိုင်တဲ့ ပန်းချီစိုးမိုး။ သူကောင်းလို့၊ သူ့ဇာတ်ကား အခင်းအကျင်း၊ သူ့အရုပ် Rhythm ရီသမ်တွေ အရမ်းကောင်းတဲ့အတွက် အခင်းအကျင်းတွေ ကောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က လှိုင်းစီးသလို အိပဲ့အိပဲ့နဲ့ လိုက်ရုံပါပဲ။ သိပ်ဘာမှ ခက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကျေးဇူးရှင်အစစ်တွေက အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ငွေကို ရေလို သုံးခဲ့လို့...၊ ရေလိုသုံးတဲ့အလား မတရား ဖြုန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုလဲ၊ ပိုက်ဆံတွေ... ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ကရမှန်း မသိဘဲနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ သိမ်းဖို့နေရာ မရှိတဲ့လူ၊ ကျွန်တော်တို့က ပိုက်ဆံကို ရှာလို့ မရတဲ့လူ၊ သူတို့က သိမ်းဖို့နေရာ ခက်နေတဲ့လူ၊ ပိုက်ဆံထားဖို့နေရာတွေ လိုက်သိမ်းမှ ရမယ့်လူ၊ အဲဒီလူက ဘယ်သူလဲဆိုတော့ အဲဒီ...
(အဲဒီမှာ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဇော်ဇော်အောင်က ရေသန့်ပုလင်းကို စန္ဒရားတင်ဝင်းလှိုင်ကို ကမ်းပြီး ကန်တော့ပါတယ်။ စန္ဒရား တင်ဝင်းလှိုင်ကလည်း ကရမလို ထိုင်ရမလိုနဲ့ ကွတကွတ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဇော်အောင်က ပြောနေတာ ကြာလို့ ရေသောက်ဦးဆိုပြီး သရော်တာလား၊ ထိုင်ကန်တော့တော့ ပြောတာကိုပဲ သဘောကျသလား ပရိသတ်အနေနဲ့ ခန့်မှန်းရ ခက်ပါတယ်။
အစီအစဉ်ရဲ့ အခမ်းအနားမှူး မတင်မိုးလွင်က ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ ပထမဆုံး ဦးစီး ကျင်းပတာမို့ ပျော်ကြလို့ပါ၊ ရှေ့တန်းက ထိုင်နေတဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေ နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ၀င်ပြောပါတယ်။ အကယ်ဒမီပွဲတက်တဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေတော့ ဒုက္ခနဲ့လှလှ တွေ့တာပါပဲ)။
Critics Yangon Globe